Ady amin’ny kolikoly :: Miandry sonia ny fanenjehana momba an’ireo harena tsy ara-dalàna • AoRaha
Ady amin’ny kolikoly Miandry sonia ny fanenjehana momba an’ireo harena tsy ara-dalàna
Na dia efa raikitra aza ny fankatoavana an’ilay lalàna mikasika ny fanagiazana an’ireo harena azo tamin’ny tsy ara-dalàna dia mbola
andrasana kosa ny sonian’ny Filoha amin’ilay didy hitsivolana mampanan-kery an’io lalàna io. Efa tsy azo ihodivirana intsony ny fanenjehana an’ireo izay voakasika amin’izany raharaha fanangonan-karena an-tsokosoko izany, araka ny nivohitra tamin’ny fihaonan’ireo mpisehatra momba any ady amin’ny kolikoly, tetsy amin’ny Motel Anosy omaly, nandritra ny fankalazana ny Andro afrikanina iadiana amin’ny kolikoly.
Tazana teny an-toerana avokoa, na ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin’ny ady amin’ny kolikoly eto amintsika sy ireo solontena eo anivon’ny minisitera ary ireo sampana mahaleo tena isanisany. “Zava-dehibe ny fisian’io lalàna vaovao io satria ireo harena maloto ireo ihany no hampiasain’ny mpanao kolikoly hitadiavana fomba hahafahana madiodio amin’ny sazy miandry azy. Hanan-kery avy hatrany ny fanadihadiana amin’ireo raharaha efa mandeha, vantany vao voasonian’ny Filoha io lalàna io”, hoy i Lamina Boto Tsara Dia, tale jeneralin’ny Sampandraharaha malagasy iadiana amin’ny Famotsiam-bola (Samifin).
Nisy ihany koa ny famoahana an’ireo voka-pikarohana mampiseho ireo antontan’isa momba ny kolikoly izay nataon’ny ny fikambanana Coef Ressources sy ny Afrobaromètre ary ny Transpa­rency International Initiative, izay nahafantarana fa eo
amin’ny laharana fahefatra be kolikoly indrindra aty Afrika i Madagasikara. Mbola anjakan’izany ny fitandroana ny filaminana (44%), ny raharaham-pitsarana (39%) sy ny fadintseranana, ny fampandehanan-draharaha eny anivon’ny fanjakana (36%), ny fampidirana mpiasa sy ny fitsaboana (30%)…
Aza variana mi-velirano